Dawn of the Planet of the Apes (2014) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Imdb Ratings : 7.6/10 Rotten Tomatoes : 90% Genre: Action, Adventure, Drama Run Time :2hours 10 minutes Dawn of the Planet of the Apes (2014) သညျ IMDb 7.6 Rotten Tomatoes 90% Google User 90% ရထားသော ဒါရိုကျတာ Matt Reeves ရိုကျကူးထား၍ Mark Bomback, Rick Jaffa တို့က ဇာတျလမျး ဇာတျညှနျးရေးသားကာ သရုပျဆောငျ Gary Oldman, Keri Russell, Andy Serkis တို့ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားသော Action, Adventure, Drama ဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈတဲ့အတှ ကျ ခဈြခွငျးအားဖွငျ့ တငျဆကျလိုကျပါရစေ.. Caesar ဦးဆောငျ ဝကျဝံတှေ ပါဝငျနသေော မြိုးရိုးဗီဇကွီးထှားနသေော နိုငျငံတဈခုကို ရှေးဟောငျးဆယျစုနှဈတဈခုက ပို့လှတျထားေ သာ ဗိုငျးရပျဈမြားပြံနှံ့မှုရဲ့ ကြ နျရှိနသေော လူသားအဖှဲ့ရဲ့ ခွိမျးခွောကျခွငျးကို ခံရလရော ဘယျလို ပွနျလညျတှနျးလှနျကွမလဲ ဇာတျကား မှာ ကွညျ့ရှုခံစားကွညျ့ကွပါလို့….
Imdb Ratings : 7.6/10 Rotten Tomatoes : 90% Genre: Action, Adventure, Drama Run Time :2hours 10 minutes Dawn of the Planet of the Apes (2014) သည် IMDb 7.6 Rotten Tomatoes 90% Google User 90% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Matt Reeves ရိုက်ကူးထား၍ Mark Bomback, Rick Jaffa တို့က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Gary Oldman, Keri Russell, Andy Serkis တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Drama ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွ က် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ.. Caesar ဦးဆောင် ဝက်ဝံတွေ ပါဝင်နေသော မျိုးရိုးဗီဇကြီးထွားနေသော နိုင်ငံတစ်ခုကို ရှေးဟောင်းဆယ်စုနှစ်တစ်ခုက ပို့လွှတ်ထားေ သာ ဗိုင်းရပ်စ်များပျံနှံ့မှုရဲ့ ကျ န်ရှိနေသော လူသားအဖွဲ့ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းကို ခံရလေရာ ဘယ်လို ပြန်လည်တွန်းလှန်ကြမလဲ ဇာတ်ကား မှာ ကြည့်ရှုခံစားကြည့်ကြပါလို့….
Al Vicente Andy Serkis Carol Sutton Chase Boltin Christopher Berry Deneen Tyler Doc Shaw Enrique Murciano Gary Oldman J.D. Evermore James Franco Jason Clarke Jocko Sims Jon Eyez Judy Greer Karin Konoval Keir O'Donnell Keri Russell Kevin Rankin Kirk Acevedo Kodi Smit-McPhee Lee Ross Lombardo Boyar Lucky Johnson Matthew James Michael Papajohn Mike Seal Mustafa Harris Nick Thurston Richard King Scott Lang Terry Notary Thomas Rosales Jr. Toby Kebbell
Option2server.mfile.cloud 611 MB SD (480p)
Option4yuudrive.me 611 MB SD (480p)
Option 10 sharer.pw 3.6 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 11 yuudrive.me 3.6 GB FHD (1080p) DTS 5.1